Saan-saan Colaadeed oo laga soo sheegayo 6-da Goobood ee Bariga Degmada Lughaya – Xeernews24
Saan-saan Colaadeed oo laga soo sheegayo 6-da Goobood ee Bariga Degmada Lughaya
6. August 2016 /in WARAR/NEWS /von admin
Lixddan Goobood ee Barigga Lughaya ayaa xidhnaan jirey intaay somaliland jirtey taaso sababtay in beesha waqooyiga hargeysa degta aay tidhaah hargeysa hala soo raaciyo goobahaas.
Si kastaba ha ahate meeshan oo hadalkeeddu in badan soo noq-noqday ayaa waxaa dhacday xiligi laga bilaabay diwaan gelinta gobalka awdal in meello u dhow laga bilaabo si dadka halkaa u degani aay iskaga diwaan geliyaan.
Nasiib daro salaadiin iyo qoriiley ka soo baxday hargeysa ayaa soo weeraray Goobta la idhaah Hadeyta.
Salaadiinti waa la xidhay iyo nimankii kalaba,iyadoon dadkii halkaa deganaa aan wax garawshiyaa la siin ayaa la soo daayey nimankii.
Dadka goobahaas iska diwaan geliyey ayaa aha dad aad u taageeri jirey xisbigii xaqsoor ee hadhay, dadka degaankaas ugu badani waxaay godob ka tirsanayen saylici ee madax-weyne ku xigeenka ah.
Dadyowga halkaa u badan oo la dareesan yahay inaay taageero mug leh u hayaan xisbiga waddani ayaa waxaay ku heshiiyen Muuse Biixi iyo C.raxmaan saylici inaay doonayaan dadkii iska diwaan gelin waayey waqooyiga hargeysa inaay ku qanciyaan halkan darteed ayaa isku diwaan gelin weeydeen soo maha kaalayo iska diwaan geliya.
Tanna waxaay cadaaynaysaa qaayb-qaayb sanaanta ku soo socota somaliland iyo inaay colaaddo ka bilaabman.
Shabakadda caalamiga ee sayruuq.com Oo kala xidhiidhay khadka telephoneka Caaqil Guuleed Oo ku sugan Degaanka cabdi geeddi ayaa noo xaqiijiyey in saan-saan colaadeed jiraan Oo la isku hub uruursanayo tana aay noqonayso tu lagu kala baxo.
Shabakadda Sayruuq ayaa mar kale la xidhiidhay Degmadda lughaya,Waxaanu helnay caaqil Awrooble Oo isna noo sheegay in beesha badaraxaan ee ciise ee dhulkaas u badani diyaar u yihiin cid walba oo degaankaas ugu timaadda inaay khaayr kala kulmaayn.
Koox ku magacownayd wisiiro reer Boorama ah oo laga soo diray madaxdooyadda Hargeysa oo kolkii horaba meel qaldana laga soo afuufay meel kalo qaldana loo afuufay waxay Boorama kala soo noqdeen honga fara madhan warar qaar waxay soo sheegeen in wasiiray ay saaka aroorti Hora u guureen degmooyinka bariga Lughaya si ula soo kulman dadka degan xaqa u leh oo Hargeysa iyo Boorama toona waji iyo wanaag ka sugeyn.
Wixii war ku soo kordha degaanadas waxaa kala socon kartaan XeerNews.com
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/08/f1.jpg 798 506 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-08-06 14:18:592016-08-06 14:31:10Saan-saan Colaadeed oo laga soo sheegayo 6-da Goobood ee Bariga Degmada Lughaya
Gabadh reer Djibouti ah oo dalka Maraykanka tababar ay u tagtay ka soo hoysay... Hadday Dire-Dhaba Dawaaqday reer Sittiyow Dhankeed Jirta